UKhune uthembisa izicoco eNaturena | IOL Isolezwe
UKhune uthembisa izicoco eNaturena
Isolezwe / 19 June 2012, 12:27pm /
POLOKWANE, SOUTH AFRICA - MAY 09, Itumeleng Khune during the Absa Premiership match between Kaizer Chiefs and Ajax Cape Town at Peter Mokaba Stadium on May 09, 2012 in Polokwane, South Africa Photo by Lefty Shivambu / Gallo Images
‘SIZOSHANELA zonke izicoco eziphambi kwethu ngesizini entsha futhi sizoqala ngeCarling Black Label Cup okuyiyona ezosivulela iminyango yokuqoqa kwasani okuphambi kwethu. Ukucanasa kwePirates kuphelile manje sekuyisikhathi sokubuya kwezinsuku zenjabulo ePhefeni.”
Lawa ngamagama ashiwo ngukaputeni weBafana Bafana u-Itumeleng Khune abefuna aqoshwe, kugcinwe le nkulumo, ngesikhathi enengxoxo ekhethekile neSolezwe izolo emini. Okwenza uKhune akhulume kanje yindlela leli qembu elisayinise ngalo abadlali abaseqophelweni eliphezulu.
AmaKhosi alande izibabuli zabadlali okubalwa kubona oMorgan “Mr Reliable” Gould oyisiqongqwane seBafana Bafana, Siboniso “Pa” Gaxa obedlala kuLierse SK yaseBelgium, Siyabonga “Doctor” Nkosi osebuya naku-Arminia Bielefeld yaseGermany, Kgotso Moleko obevala emuva kuBloemfontein Celtic, Sakhile Hlongwa obeyihlikihla kuThekwini Coastal kaLindani “Mantayi” Shezi waKwaMakhutha kanti kulindeleke ukuthi iqede noKingston Nkhatha maduze uma esebuye kubo eZimbabwe. Omunye umdlali ogaqelwe yiChiefs ngu-Eric Mathoho weCeltic.
“Ngifuna ukushayela abaphathi ihlombe ngokulanda abadlali abaseqophelweni eliphezulu. Ngizizwa ngimkhulu futhi ngiyaziqhenya ngokuba ngumdlali weChiefs. Laba badlali bazonyusa umoya wokuzethemba eqenjini,” kusho uKhune.
“Okungenza ngingangabazi ukuthi iChiefs izoqopha umlando ngokuwina zonke izicoco kule sizini wukuthi laba badlali sesijwayele ukudlala nabo. Badlala kuBafana futhi kunalokhu kuxhumana okuyisiphesheli enkundleni kwazise sibonana kahle kwelesizwe. Ngeke kuze kukhalwe ngokuthi basafuna ukujwayelana nabanye abadlali ngoba siyazana. Abanye basebenzile noStuart Baxter kuBafana okuzokwenza kube lula ukuthi simqonde ukuthi ifunani kithina.”
AmaKhosi asayina lolu bisi lwabadlali nje asanda kuchitha abanye okukhona kubona uLucky Khune, Steven Ncanana, Siyabulela Songwiqi, Dominic Isaacs ozohlolwa yi-Ajax Cape Town noThela Ngobeni abebeyifenisha kuleli qembu eliqede isizini edlule lincela izithupha.
“Abalandeli beChiefs kumele balungiselele injabulo yodwa kule sizini ezoqala. Angisakwazi nokulinda ukuthi iqale, ngifisa sengathi njengoba sikhuluma nje ngabe ngisenkundleni. Kuzokhala inqwaba yabantu kule sizini. Angikuphinde lokhu, siqala ngeBlack Label Cup. Laba badlali abasha balambele impumelo okuyinto nathi esiyibhekile. Sifuna ukuqala ngayo iSundowns emdlalweni wokuqala weMTN 8. Uyazi-ke nawe iChiefs uma inqobe umdlalo wokuqala kuba nzima ukuyivimba. Imali yabo abalandeli ngeke bayikhalele nakancane. Sibaphoxile saphinde sabahlaza ngesizini edlule, manje sekuyisikhathi sokuthi sixolise kubona ngokubanqobela izicoco. Abahambe beyothenga amajezi eChiefs ukuze bezopenda inkundla ngombala omnyama noyigolide bese sibanika okungokwabo,” kusho uKhune.
Emdlalweni weligi AmaKhosi azovula ngaMaZulu eMoses Mabhida Stadium.
Ngokwamavoti eCarling Black Label Cup, uKhune nguyena ozihola phambili kuChiefs kanti kuPirates kuhamba phambili uMoeneeb Josephs. Umdlali omusha ongakangeni ohleni lweChiefs uGould kanti uGaxa usephakathi.